Namoaka ny DVD voalohany mitondra ny lohateny 'Ry Jesoa mofon’aina' - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Namoaka ny DVD voalohany mitondra ny lohateny 'Ry Jesoa mofon’aina'
Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy ny famoahan’ny tarika Savah Group ny raki-kira sy sary na DVD. Io no voaloham-bokatra raha DVD no resahina. Andinindininy.
« Ry Jesoa mofon’aina » io no lohateny nampitondrain’ny tarika Savah Group ny raki-kira sy sary na fantatry ny rehetra hoe DVD. Voaloham-bokatra raha DVD no resahana. Roa taona no nikarakarana azy hoy Ravahatra Adrien, raha nampiseho ny vokatra izy ny alarobia 13 oktobra teo. Roa taona satria tao anatin’ny fihibohana ka nanao sarotra ny fivezivezena rehefa hanao video any ampefy ohatra na toeran-kafa. Ny lohateny dia mitory avy hatrany fa hira mifototra amin’ny finoana ny hira raketin’ny DVD ity izay ahitana hira 10.
Ireto avy ny lohatenin’ny vokatra hita ao : “Ary ny Teny tonga nofo, Ny andronao, Mifona, Ny hafatry ny Tompo, Mariazy, 3F, Mifankatiava, Ry Jesoa Mofon'aina, Noraisinay, Masina Maria”. Ny sivy amin’ireo hira dia Adrien Ravahatra no namorona azy ary ny faha-folo (faha-8 raha ny filaharana ao anaty DVD dia i Ramaersaona Paul no namorona azy. Io no lohateny nampitondraina ny anaran’ny DVD ho fanomezam-boninahitra ity mpamoron-kira ity izay efa nodimandry. Hira fantatry ny mpiangona katolika rehetra io hira io, ary efa mpandeha amin’ny radio ihany koa. Hira fanao amin’ny fotoan-dehibe rehetra raha eo anivon’ny fiangonana katolika. “Ankoatra ny fanomezam-boninahitra ity mpamoron-kira be mpahafantatra ity dia tombony lehibe ho an’ny tsirairay koa ny manana ity DVD ity satria handrenesana ny feo marina araka ny namoronan’ny Ramaersaona azy. Matetika dia miova na mivalana mihitsy ny fomba fihiran’ny olona azy eo amin’ny andininy faharoa” hoy Andrien Ravahatra.
Eny amin’ny toerana mahazatra no ahitana ny raki-kira sy sary. Afaka mifandray mivantana amin’ny tarika ihany koa ao amin’ny pejy fesiboky na ny an’i Adrien Ravahatra momba ny fanjifana azy io.
Ny mombamomba ny tarika
Ny taona 2015 no niforona ny tarika. Nomena ny anarana Savah Group. Ny SaVah dia nalaina tamin’ny voambolana Sandratra sy Vahatra. Ny Savah Group dia manana teny filamatra hoe « Asandrato avo ny fototry ny Finoantsika ». Efatra ny isan’ny mpamoron-kira ka ny roa efa nodimandry dia i Ramaersaona Paul, izay maitre de chapelle tao amin’ny paroasy Md Filipo sy Zaka ao Tanjombato sy i Mgr Rakotondravahatra Jean Guy, monsenera niasa tany Ihosy. Soritana fa vao avy nomarihan’ny tao Ihosy ny faha 25 taona nahafatesany. Ravahatra Adrien sy i Abel Ratsimba no mpamoron-kira roa hafa. Manana mpamolavola feo ny tarika, izay mamadika ny hira ho solfa.
Efa namoaka raki-kira ny tarika tamin’ny taona 2017. Efa nanao gala évangélique ihany koa izy ireo.
Nisafidy ny hira fankalazana ny Mpahary ny tarika ny variété évangélique. Hira azo hiraina any ampiangonana rehefa mahazo ny fankatoavana. Tsy katolika avokoa anefa ny mpikambana ao.
Ny fikarohana momba ny zafindraony no isan’ny dingana tian’ny tarika hilofosana. Faritra maro no mihira io fomba fihirana iray io. Isan’ny mampiavaka tokoa io fomba iray io. Koa miandry ny vokatra isika.